Boeing kpọrọ Onye isi oche ọhụrụ nke Ọrụ Gọọmentị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Boeing kpọrọ Onye isi oche ọhụrụ nke Ọrụ Gọọmentị
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Akpọrọ Ziad S. Ojakli dịka onye isi osote onye isi Boeing nke ọrụ gọọmentị
Ojakli na -esonye na Boeing na -eso ọrụ na -aga nke ọma na nke dị iche iche na nnukwu ọrụ mmekọrịta gọọmentị ụwa niile na ụlọ ọrụ ụgbọ ala na ego na mgbakwunye na ije ozi n'ime nchịkwa White House nke onye isi ala US George W. Bush mbụ.
Akpọrọ Ziad S. Ojakli dị ka onye isi oche Boeing ọhụrụ onye isi oche nke ọrụ gọọmentị na -amalite na Ọktoba 1, 2021.
Ojakli ga -eduzi mbọ Boeing na -eme n'ihu ọha, na -arụ ọrụ dị ka onye na -ahụ maka imebi ihe, na -elekọta Boeing Global Engagement.
Ojakli ga -akọrọ onye isi Boeing na onye isi oche David Calhoun ma rụọ ọrụ na kansụl Boeing.
Ụlọ ọrụ Boeing akpọrọ Ziad S. Ojakli dị ka osote onye isi oche ụlọ ọrụ nke ọrụ gọọmentị na -amalite na Ọktoba 1, 2021.
N'ime ọrụ a, Ojakli ga -eduzi mbọ Boeing na -eme n'ihu ọha, na -eje ozi dị ka onye isi na -ahụ maka ụlọ ọrụ ụwa niile, ma na -elekọta Boeing Global Engagement, ụlọ ọrụ na -ahụ maka ọdịmma ụwa. Ọ ga -agakwuru onye isi Boeing na onye isi oche David Calhoun wee rụọ ọrụ na kansụl Executive nke ụlọ ọrụ ahụ. N'ime ọrụ a, Ojakli nọchiri Marc Allen, Boeing's Chief Strategy Officer, onye rụrụ ọrụ dị ka onye osote onye isi oche nke ọrụ gọọmentị kemgbe ọnwa Juun gara aga.
Calhoun kwuru, "Ziad bụ onye ama ama ama ama nke nwere oke egwu nke iduzi amụma ọha na ọrụ mmekọrịta gọọmentị maka ụlọ ọrụ ụwa niile." “Ahụmịhe ya sara mbara nke na -arụ ọrụ ndị isi na gọọmentị na nkeonwe ga -enye aka na njikọ aka anyị na ndị ọrụ anyị ka anyị na -aga n'ihu na -elekwasị anya na nchekwa, ịdị mma na nghọta, na ịgbanwe ụlọ ọrụ anyị maka ọdịnihu. Achọrọ m ikelekwa Marc Allen maka idu ndú ya nke nzukọ ọrụ gọọmentị anyị n'ọnwa ndị na -adịbeghị anya ka ọ na -aga n'ihu na -ebute atụmatụ ụlọ ọrụ anyị ụzọ. "
Ojakli na -esonye Boeing na -eso ọrụ na -aga nke ọma na nke dị iche iche na nnukwu ọrụ mmekọrịta gọọmentị ụwa niile na ụlọ ọrụ ụgbọ ala na ego na mgbakwunye na ije ozi n'ime White House nchịkwa nke onye isi ala US mbụ George W. Bush.
N’oge na-adịbeghị anya, Ojakli rụrụ ọrụ dị ka onye njikwa na onye isi osote onye isi nke Softbank site na 2018-20, ebe o mepụtara ma duru ọrụ ụlọ ọrụ ntinye ego mbụ nke ụlọ ọrụ itinye ego na nkwado nke iwu niile, usoro iwu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ụlọ ọrụ ahụ. Tupu isonye na Softbank, Ojakli nọrọ afọ iri na anọ na Ford Motor Company dị ka osote onye isi otu, ebe o duuru otu mba ụwa nke mere ka ebumnobi azụmaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ dịkwuo elu na ijikwa mmekọrịta ya na gọọmentị na ahịa 14 gburugburu ụwa. N'ime ọrụ ahụ, ọ tụkwara ogwe aka ebere nke Ford enyere iji kwado ihe kpatara ụwa niile.
Na mbụ, Ojakli jere ozi na White House dị ka onye osote onye isi maka okwu mmebe iwu maka Onye isi ala George W. Bush site na 2001-04. Na mbu, Ojakli bụ onye isi ndị ọrụ na onye ntụzi iwu maka onye omebe iwu US Paul Coverdell wee malite ọrụ ya n'ọfịs onye omebe iwu US Dan Dan.
Ojakli na -eje ozi ugbu a dị ka onye isi oche nke Board nke Smithsonian National Zoological Park na Washington, DC na ọ bụ onye otu bọọdụ nke Jackie Robinson Foundation.
Ojakli nwere nzere bachelọ na Gọọmentị America na Mahadum Georgetown.